Vanomirira Vakaremara Voramba Rusarura muSeneti
Gumiguru 22, 2013
Senator Nyamayabo Mashavakure
HARARE — Nhengo dzinomirira vanorarama nehurema muparamende idzo dzakasiyiwa pakadomwa nhengo dzemakomiti eseneti svondo rapfuura,dzinoti dzazopinzwa mumakomiti edare iri neChipiri mushure mekugunun’una kwadzakaita.
Apo vakadoma nhengo dzemakomiti matanhatu edare reseneti kubva kumapatao ese svondo rapfuura, mutungamiri weseneti, Amai Edinah Madzongwe, vakasiya vaviri ava VaNyamayabo Mashavakure naAmai Annah Shiri, izvo zvakaita kuti VaMashavakure vasimuke vachitsutsumwa kudare iri.
Asi Amai Madzongwe vagadzirisa izvi neChipiri apo vadoma VaMashavakure kuti vave nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu neimwe inoona nezvekupa masimba ehupfumi kuvatema vemuno.
Amai Shiri vadomwawo kuve nhengo yekomiti inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi pamwe nekomiti ye millenium development goals.
VaMashavakure vanoti havana kushamisika nekusiiyiwa kwavange vaitwa mumakomiti aya.
VaMashavakure vanoti vanofara kuti vave kuzoshanda nevamwe mumakomiti aya. Vanotiwo kunze kwezvakaitika svondo rapfuura, vari kushanda zvakanaka nenhengo dzedare reSenate pamwe ne National Assembly.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanhu vanorarama nehurema, reCentre for Disability and Development, VaMasimba Kuchera, varatidza kusafara nezvakaitika.
VaKuchera vanoti vange vasina tarisiro yekuti zvinhu zvakadai zvingaitike.
VaMashavakure naAmai Shiri vakasarudzwa kuti vamirire vanhu vanorarama nehurema museneti sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Zvichakadai, dare reseneti ragara kwemamitsi gumi nemasere chete sezvo range risina zvekuita.
Nhengo dzedare iri dzange dzisina chido chekuzeya mashoko emutungamiriri wenyika pakuvhurwa kweparamende uye dzangotambira gwaro remafambiro akaita musangano wekomiti yeAfrican Parliamentary Union uyo wakaitwa mwedzi wapfuura.